Kooxda Arsenal Oo Ammaah Ku Bixinaysa Xidiga Mesut Ozil. – somalilandtoday.com
Kooxda Arsenal Oo Ammaah Ku Bixinaysa Xidiga Mesut Ozil.
(SLT-London) Arsenal ayaa lagu soo warramayaa iney diyaarisay qorshe layaab leh oo ay amaah ugu direyso xiddiga reer Jarmal Mesut Ozil, balse warbaahinta Ingiriiska ayaa baahiyay inuu xiddigaan go’aan adag ka gaaray.
Mesut Ozil ayaa ku dhibtooday ka hoos ciyaaridda Unai Emery kadib markii uu noqday xiddig aan ahmiyad badan ka laheyn garoonka Emirates, dhawr kulan ayuu ku seegay go’aanno u gaar ah macalinka reer Spain, taasna waxey dhalisay in warbixino badan ay la xiriiriyaan inuu ka baxayo London.
Ozil ayaa dhaawac dhanka jilibka ah ku seegay kulankii ay kooxdiisa 5-1 khasaaro ah kala kulantay Liverpool oo hogaamineysa horyaalka Premier League, sidoo kalana waxaa jiray kulan ka tirsan horyaalka oo lagu reebay qaab xeeladeysan waana ciyaar ay ka horjeedeen Bournemouth.
Sida ay ku warantay ESPN, Ozil ayaa iska diiday inuu bishaan January ka baxo garoonka Emirates, wuxuuna diyaar u yahay inuu booskiisa difaacdo isla markaana kasbado kalsoonida tababarahiisa Unai Emery.
Dhawaan ayey aheyd markii uu Ozil saxiixay heshiis looga dhigay xiddiga ugu mushaarka badan kooxdiisa, wuxuuna jeebka ku shubtaa 300,000 kun oo Pound isbuucii.